[Home][Qoraalo][Kitaabka quduuska ah]
Saaxiibayaal, Kitaabka Quduuska ah wuxuu leeyahay laba qaybood oo kala ah: Axdigii Hore iyo Axdiga Cusub. Axdigii Hore waxaa la qoray wakhtigii nebi Muuse [waa 1400 oo sannadood ka hor dhalashadii Sayid Ciise Masiix] ilaa iyo nebi Malaakii [waa 400 oo sannadood ka hor dhalashadii Sayid Ciise Masiix]. Axdiga Cusubna waxaa la qoray dhalashadii Sayid Ciise Masiix ka dib, waxaana qoray rasuulladii Masiixa ee goob jooga ahaa. Axdigii Hore iyo Axdiga Cusub, labadaba waad u baahan tihiin. Ma garan kartid Axdiga Cusub ka Hore la'aantiis; sidaas oo kalena ma garan kartid Axdigii Hore ka Cusub la'aantiis. Labadda qaybood ee Kitaabka lama kala saari karo oo waa sida silsilad isku xidhiidhsan.
Hoos waxaa jira xiriir ku geyn kara websayd kale. Markaad gaartid "e-Sword" fadlan hoos ka eeg liiska turjumaada luuqadaha faraha badan, ilaa aad gaartid "Somali Bible". Haddii aad bartaas gujisid, waxaad ka heli kartaa Kitaabka Quduuska Ah oo dhan waxaanad ku kaydsan kartaa kombiyuutarkaaga.
"1 Ilaah wuxuu waagii hore siyaalo badan oo kala duduwan awowayaasheen kula hadlay nebiyadii,
4 isagoo aad uga wanaagsan malaa'igaha siduu u dhaxlay magac ka sii wanaagsan kooda."
Copyright (c) 2010 Dugsiganolosha. All rights reserved.